कोरोना संक्रमितको मृत्युको कारण: हृदयघात, श्वासप्रश्वासमा जटिलता र अंगले काम गर्न छोड्नु :: Setopati
कोरोना संक्रमितको मृत्युको कारण: हृदयघात, श्वासप्रश्वासमा जटिलता र अंगले काम गर्न छोड्नु
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, चैत ३०
वैज्ञानिक तथा चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेपछि संक्रमितको मृत्यु हृदयघात, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, सेप्टिक सक वा शरिरका कयौं अंग खराब भएर पनि हुनसक्ने बताएका छन्।
उनीहरूले केही राज्यहरूले यसरी मृत्यु हुनेहरू कोरोनाका कारण नभइ अन्य कारणले मरेको भन्ने भनाइलाई खारेज गरेका छन्।
‘कोभिड-१९ ले अरु गम्भीर किसिमको निमोनियाले जस्तै सास फेर्न गार्हो बनाएर र हृदयघातबाट जीवन लिन्छ। यसमा फरक के हो भने नयाँ भाइरस विरूद्ध लड्न हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता कम हुन्छ’ नयाँ दिल्लीको इस्टिच्युट अफ जेनोमिक्स तथा इन्टिग्रेटेड बायोलोजिका निर्देशक डा. अनुराग अग्रवालले भनिन्।
यो साताको सुरुमा एक ७८ वर्षीय इटालियन महिलालाई गुरुग्रामको मेदान्त अस्पतालले हृदयघातबाट मृत्यु भएपनि त्यसको पछाडी कोभिड-१९ भएको जनाएको थियो।
परीक्षणमा सार्स-कोभ-२ को संक्रमण निदान भएको पाइएको भएपनि केही दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो जबकी अस्पतालमा उनलाई यसैकारणले भर्ना गरिएको थियो।
'उनको मृत्यु शरिरका कयौं अंगले एकसाथ काम गर्न छोडेर र त्यसपछि भएको हृदयघातबाट भएको हो। अस्पताल भर्ना हुँदा उनलाई मृगौलाको समस्या पनि थियो। त्यसमाथि ८० वर्ष नजिकको उमेर भएका त्यस्ता व्यक्तिहरुको सार्स-कोभ-२ का कारण हुने मृत्यु १५ प्रतिशतको नजिक हुन्छ’, एनेस्थ्योलोजी एन्ड क्रिटिकल केयर, मेडाटा–द मेडिसिटीका अध्यक्ष डा. यतीन मेहेताले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई भनेका छन्, ‘मृत्युको कारण कोरोना भाइरस नै हो। भाइरसको लगातारको संक्रमणले उनको कयौं अंगलाई काम गर्न दिएन।’
ती महिलाको गत बिहीबार मृत्यु भएको हो। उनीसँगै भर्ना भएका उनको समूहका बाँकी १३ इटालियनहरु भने ठिक भएर दुई साता अगाडि नै डिस्चार्ज भइसकेका थिए।
महामारीको चपेटामा परेका देशहरुको तथ्यांक हेर्दा हरेक ५ बिरामी मध्ये एक जना कोरोनाबाट गम्भिर हुने देखाएको छ। यसमा फोक्सोको रोग, हृदयघात र मधुमेह जस्ता तीन दीर्घकालीन रोगले कोरोना संक्रमितको ज्यान लिने जोखिम बढाउने गरेको छ।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (जामा) को एक जर्नलमा प्रकाशित तथ्याकं अनुसार उनीहरूको अध्ययनले चीनका ४४,६७२ संक्रमितमा यस्तै जोखिम देखाएको छ।
अमेरिकामा आईसियूमा उपचार गराइरहेका ७८ प्रतिशत कोरोना संक्रमित र अस्पतालमा भर्ना भएका ७१ प्रतिशतमा माथि उल्लेखित एक वा बढी जटिलता पाइएको छ।
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानमा गरिएको अध्ययनमा संक्रमित पाँच मध्ये एकमा हृदयघातको समस्या देखाएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३०, २०७६, ०१:४६:००